အတွဲနဲ့လား? တစ်ကိုယ်တည်းလား? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန်, သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး အတွဲနဲ့လား? တစ်ကိုယ်တည်းလား?
အတွဲရှိတဲ့သူတွေ နဲ့ တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေဆိုတာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒင်္ဂါးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ ခေါင်းနဲ့ ပန်းလိုပါပဲ။ သတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင် အခြေအနေနှစ်မျိုးစလုံးမှာ သာတာတွေ နာတာတွေ မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း အတွဲရှိမှ ကောင်းတယ်… တစ်ကိုယ်တည်းဘဝကပဲ နားအေးတယ်… ဆိုတဲ့ တချို့သူတွေလဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတခေါက်သိလိုရာမေးကနေ FA နဲ့ RS တွေရဲ့ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အမှန်တရား ခပ်ခါးခါးလေးတွေကို ဘက်မလိုက်ဘဲ တင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်။
လွတ်လပ်မှု (Freedom) ဆိုတာက RS တွေအတွက်တော့ အလှမ်းဝေးတဲ့ အသုံးအနှုန်းဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ တခါတလေမှာ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တစ်နေရာရာသွားမယ်ဆိုရင် ချစ်သူကို အရင်ဆုံးသံတော်ဦးတင်ရတာမျိုးတွေ၊ ရည်းစားငုတ်တုတ်ရှိနေတဲ့အတွက် တခြားသူတွေနဲ့ အပြောအဆို အပြုအမူက အစ ဆင်ခြင်ရတာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပြီး နို့မဟုတ်ရင် ရည်းစားက ကွိုင်ရှာလို့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မျိုးမှာ FA တွေက ဆိုင်သူရော ပိုင်သူရောမရှိတဲ့အတွက် သွားချင်ရာသွား၊ စားချင်ရာစား နေချင်သလို နေလဲ ဘယ်သူမှ ကွိုင်လာရှာမယ့်သူလဲ မရှိပါဘူး။
ဒီတော့ လွတ်လပ်မှုဆိုရင် FA – 1, RS –0ပါ…
(၂) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျော်ရွှင်မှု
လောကဓံမှာ ကျင်လည်နေရတဲ့ လူသားတွေဆိုတာ ဘဝအတက်အကျ အနိမ့်အမြင့်တွေရှိတတ်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ဘဝရဲ့ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေတွေနဲ့ ကြုံလာရရင် မျှဝေခံစားပေးမယ့်သူရှိတဲ့ RS တွေက FA တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေထက် တပန်းသာပါတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ တခြားသူတွေမသိစေချင်တဲ့ အခက်အခဲတွေ ကြုံလာခဲ့ရင် လက်တွဲဖော်ရှိတဲ့ သူတွေက ဒီလိုကိစ္စတွေကို ကိုယ်ချစ်သူဆီမှာ ရင်ဖွင့်လို့ရမယ်။ နှစ်ယောက်တူတူ တိုင်ပင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖေးမ အားပေးနိုင်မယ်။
FA တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေကတော့ ရင်ဖွင့်ရမယ့်လူမရှိဘဲ ကြုံလာရတဲ့ပြဿနာတွေကို ကြိတ်ပြီး ဖြေရှင်းရနိုင်ပါတယ်… (ဒီအချက်မှာ RS နဲ့ FA ကိုပဲ အဓိကထားပြောတဲ့အတွက် မိသားစုတေွ မိတ်ဆွေတွေက အကျုံးမဝင်ပါဘူး)
ဒီတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျော်ရွှင်မှုမှာတော့ RS – 1, FA –0ပါ…
(၃) ငွေရေး ကြေးရေး
ရည်းစားစထားပြီဆိုတာနဲ့ Birthday တွေ Anniversary တွေ Valentines’ Day တွေမှာ နှစ်ယောက်အတူထိုင်နေရုံနဲ့ မပြီးတဲ့အတွက် လက်ဆောင်တွေ ပေးရမယ်… ဒီကြားထဲ Surprise တွေကလဲပါသေးတဲ့အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျများမယ်။ ဒီနေရာမှာ ရည်းစားငုတ်တုတ်ရှိနေတဲ့ RS တွေက တစ်ကိုယ်တည်းအတွက်ပဲ အသုံးစရိတ် ကုန်မယ့် FA တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် တစ်ပန်းရှုံးပါတယ်…
ဒီတော့ ငွေရေး ကြေးရေးမှာတော့ FA – 1, RS –0ပါ…
အများအားဖြင့် RS တွေကတော့ FA တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အထီးကျန်တဲ့အချိန်ကတော့ နည်းပါးမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဖုန်းတွေအကြာကြီးပြောမယ်… အားလပ်ရက်မှာ လျှောက်လည်မယ်… Dinner Date တွေ လုပ်မယ်စသဖြင့် Activity များတဲ့အတွက် ပျင်းတာတွေ၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘဲ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အားလပ်ရက်တွေဆိုတာ RS တွေအတွက် မရှိသလောက် ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။
အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပေမယ့် FA တွေက လက်တွဲဖော်မရှိတဲ့အတွက် အချိန်တော်တော်များများကို တစ်ယောက်တည်း ကုန်ဆုံးရတတ်ပါတယ်။ တခါတလေမှာ ကိုယ်ပေါင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက အတွဲကိုယ်စီရှိနေကြပြီး ကိုယ့်မှာမရှိရင် တစ်ယောက်တည်း စိတ်ဓာတ်ကျစရာကြီး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အထီးကျန်တတ်တဲ့ FA –0နဲ့ RS ကတော့ 1 ပါ…
ဒါကတော့ အတွဲရှိသူတွေနဲ့ တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဓိကအချက် (၄) ခုပေါ်မှာ အခြေခံထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လောကကြီးမှာ ဘယ်အရာ ဘယ်သူကမှ ပြီးပြည့်စုံတယ်ရယ်လို့ မရှိတဲ့အတွက် တသမတ်တည်းတော့ ဘာကိုမှ မျှော်လင့်လို့မရပါဘူး။ တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ်က Single ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Taken ဘဝပဲရောက်ရောက် ကိုယ့်ဘဝကို နေတတ်သလိုနေပြီး အကောင်းဆုံး Handle လုပ်နိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်ခင်ဗျာ…